Vumela iingcali zikubhalele iphepha lekota
Yenza umsebenzi wasekhaya
Yiba nephepha lekota elibhalwe ngokufanelekileyo. Unathi ufumana uncedo olukhawulezayo kumbhali onesiporho onamava.
Zininzi izizathu ezifanelekileyo zokubhala iphepha lekota vumela
Ngaba okwangoku ukwisigaba soxinzelelo kwizifundo zakho? Ngaba ucinga ngokufumana uncedo? Ufuna elandelayo Umsebenzi wendlu Masibhale, kodwa ndinexhala malunga neziphumo? Zininzi izizathu ezifanelekileyo zokufumana iphepha lekota ukuba inkqubo yakho yokubhala iye yahlaselwa.
Ukungeniswa kwexesha elibekiweyo kukubeka phantsi koxinzelelo
Umhla wokugqibela wokungeniswa kwakho usondele, kusafuneka ufundele iimviwo zaseyunivesithi ezizayo kwaye ungazi ukuba wenzeni ngenxa yeengxaki zexesha? Akukho ngxaki!
Uncedo lobuchwephesha -wenze umsebenzi wakho wesikolo
Nathi ufumana uncedo lobungcali kumava kwaye Umbhali wesiporho onobuchule. Nokuba ngowuphi umxholo! Ababhali bethu abanesiporho banesishwankathelo esibanzi kwaye esisexesheni soncwadi kwicandelo labo, baqhelene kakhulu nesigama esifanelekileyo kwaye bayayazi indlela yokusebenzisa ngokuchanekileyo iindlela ezithile zesifundo ukugcwalisa ngempumelelo iphepha lakho lekota.
Neqela lethu ecaleni kwakho, ungafundela iimviwo ezizayo kwaye akusekho mfuneko yakuzixhalabisa ngeyakho iphepha lesayensi yenza! Sijonga yonke into: ukusuka ekubhaleni isicatshulwa ukuya kwibhayibhile. Eyethu Umbhali wesiporho oqeqeshiweyo zoba umsonto oqhelekileyo ngomsebenzi wakho wasekhaya- kwaye kwelona nqanaba liphezulu.
Kwelinye icala, ngaba ukhathazwa ngabaphezulu Uxinzelelo lwexesha lezifundoKwelinye icala, ngaba uziva unetyala xa ucinga ngokuqesha umntu obhala ngesiporho?
Ngokwenyani wonke umfundi unezigaba zoxinzelelo kwizifundo zakhe kwaye woyisiwe imisebenzi emininzi ngaxeshanye. Ukuba emva koko kukho iingxaki zobuqu kwaye irente yegumbi esele linabaninzi kakhulu ekwabelwana ngalo inokuhlawulwa kuphela ngoncedo lomsebenzi ebharini, ekuphanga ubuthongo bobusuku, lixesha lokuba ufumane uncedo.
Vumela umsebenzi wakho ubhale
Ukuqeqesha kunye nepapernerds: Ukulungiselela okugqibeleleyo kwephepha lekota
IiPapernerds zinokubonelela ngepakeji engenaxhala kunye neyakho gqibezela umsebenzi wasekhaya bhala. Kwisifundo kufuneka ujongane nesihloko, kodwa ungabhukisha uqeqesho olubanzi kunye nathi.
Wir haben ochwepheshe kuzo zonke izifundo ezikwiqela, ukuze ufumane uncedo nathi nangaso nasiphi na isihloko.
Umsebenzi wasekhaya wokungqinisisa iphepha ngepapa!
Ngaba ucinga ngokuthetheleleka, imibhalo esemazantsi, ukubala kunye noluhlu lwamagama?
Mhlawumbi uncedo kuphando oluthatha ixesha loncwadi lwanele kuwe, okanye ufuna umntu osele ebhale eyakho Umsebenzi wendlu Ukuvavanywa kokuvavanywa, ukuphucula kunye nokubeka izinto zokugqibela kwinqanaba eliphezulu? Ezi nxalenye zomsebenzi zithathwa nangamaphepha epapa. Rhoqo abafundi abakuncamathelanga ukubaluleka kokuvavanywa kovavanyo okunokuveza iimpazamo ezininzi. Kungenxa yoko le nto singanikeli ngenkonzo yokubhala yeklasikhi kuphela, kodwa ikwakhangela umgangatho ngenxa yokuvavanywa kovavanyo. Uhlala usesikhathini nomsebenzi wakho ngokutshintshiselana ngolwazi kunye nombhali wakho rhoqo ngomnxeba okanye nge-imeyile. Phantse njengokusebenza nabanye abafundi. Ngokukodwa, iimpazamo ezincinci, ezinje ngokulahleka kwemibhalo esemazantsi okanye amanani, azilibaleki. Iibhulografi yakho nayo iya kujongwa ngobungcali kwaye ihlaziywe xa kukho imfuneko.
a Umbhali-moya unokukunceda emsebenzini omninzi, kodwa kusafuneka uzifundele.abafundi abaninzi bakwasebenzisa inkonzo yethu ukuqinisekisa ukuba umxholo uchanekile, itemplate evavanywe ngokugqibeleleyo yomsebenzi wakho wesikolo uze uziqhelanise nendlela yakho yokubhala.
Abafundi bathanda ukubuyela umva kuncedo lwepapernerds kunye nokubhala ghost. Siyakholisa ngolwazi kunye namava anokufumana kuphela kunjingalwazi wakho. Njengenkonzo yokubhala into efanelekileyo, uyakufumana umsebenzi wasekhaya osemthethweni, ngaphandle kweziphumo.
"NgeePapernerds ndingakwazi ukuyilawula imisebenzi yam! Enkosi."
I-Bachelor kwiSayensi zeNtlalo
Umhla wokugqibela wokungeniswa kwakho usondele, kusafuneka ufundele iimviwo zaseyunivesithi ezizayo kwaye ungazi ukuba wenzeni ngenxa yeengxaki zexesha? Akukho ngxaki! Nathi ufumana uncedo lobungcali kumntu onamava nobuchule Umbhali-moya, nokuba ngowuphi umxholo! Ababhali bethu abanesiporho banesishwankathelo esibanzi kwaye esisexesheni soncwadi kwicandelo labo, baqhelene kakhulu nesigama esifanelekileyo kwaye bayayazi indlela yokusebenzisa iindlela ezithile zesifundo ngokuchanekileyo ukuphucula eyakho Umsebenzi wendlu ukugqiba ngempumelelo. Iqela lethu ecaleni kwakho, ungafundela iimviwo ezizayo kwaye akusekho mfuneko yakuzixhalabisa ngomsebenzi wakho wesayensi Umsebenzi wasekhaya yenza!
Imibuzo malunga nomsebenzi wasekhaya kunye nokubalulekileyo ukuba ubhalile
Kubiza malini ukubhalwa kwekota?
I-95% yomgangatho womsebenzi wakho wesikolo ugqitywe ngumbhali wakho. Esi sifundo kufuneka sihlawulwe ngokufanelekileyo kwaye sinikwe ixesha elaneleyo. Iphepha lekota linikwa umfundi ekuqaleni kwesemester kwaye kufanele ukuba athathe iinyanga ezi-2 ukubhala eli phepha. Umfundi oqeqeshiweyo uya kwenza oku kwiiveki ezi-2-3.
Ungaziqhelanisa nezinto oza kuzizuza kamva. Kuxhomekeke kwixesha, umbhali kuya kufuneka ahlawulwe ngokulingana nexesha elisetyenzisiweyo.
Ngaba ukubhala ghost kusemthethweni?
Ukubhalwa kwesiporho kwezemfundo kusekwe kwimeko yomthetho ekhoyo akulawulwa ngokucacileyo.
INkundla yeNqila ePhakamileyo yaseFrankfurt (Az: 11 U 51/08) yagweba ngo-2009 ukuba isivumelwano esenziwe phakathi kwesiporho kunye nomthengi malunga nelungelo lokushicilela sasingeyonto iphikisayo. Ukubhalwa kwesiporho yinkonzo. Inkqubo ye- Qamba yokuvezwa, amaphepha amaphepha enzululwazi, izifundo zokuqala njl ngokomthetho ngokupheleleyo.
Ke ukuba ukwiphepha elikhuselekileyo ngokwasemthethweni, kubalulekile ukuba ubenalo elenziwe sisiporho Umbhalo njengetemplate kwaye ufake eyakho ifomula. Ngokwenza utshintsho, kubonakala kungowakho umsebenzi owenzileyo.
Kuthatha ixesha elingakanani ukubhala iphepha lekota?
Umda, indawo yesifundo, umthwalo womsebenzi, umsebenzi kunye neemfuno zomgangatho zichonga ixesha lokuqhubekeka ekufuneka lisetyenzisiwe. Ezi paramitha zichazwe nguprofesa, ohlala enika abafundi izihloko ekuqaleni kwesemester.
Umfundi emva koko uneenyanga ezi-2-3 zokubhala iphepha lekota. Umfundi oqeqeshiweyo kufuneka abe malunga nenyanga enye yenza. Nangona kunjalo, oku kungasentla Iiparameter zithatha isigqibo malunga nexesha lokulungisa.
Yonke eminye imibuzo kunye neempendulo malunga nokubhala ghost kunye neepapernerds zifumaneka kuthi Icandelo le-FAQ.
Ngenisa isicelo sasimahla ngoku kwaye uyakufumana umsebenzi wakho wobunzululwazi ngomhla wokukhetha kwakho! Siwenza umsebenzi wakho ngexesha.
Yenza isicelo sasimahla
Abahleli bethu baziingcali kwizifundo zabo kwaye benza umsebenzi wakho wesayensi ngokweminqweno yakho.
Umsebenzi ngamnye wahlukile
Sikunika inkululeko eqinisekisiweyo yokukopa kunye neempazamo ngokujonga ubungakanani bomgangatho kwaye ngaloo ndlela ungqina ukuba umsebenzi wakho yikopi enye ekumgangatho ophezulu. Akukho kukopa, akukho ziphumo - ukubhala ghost kobungcali.
Cela isiqwenga esahlukileyo
I-Papernerds ayinikezeli kuphela isebe elithembekileyo lomgangatho wephepha lakho lekota, i-bachelor thesis okanye i-thesis ye-master, kodwa kunye nomhleli onamava onenkonzo ebalaseleyo yokuchwetheza.
Akukho kukopa - zizinto ezizodwa kuphela.
Siya kukuvuyela ukuphendula yonke imibuzo yakho nangaphambi kokuba ubeke iodolo yakho.
Abahleli bethu zizifundiswa ezaziwayo kunye nabahlohli abaqinisekisiweyo abaneminyaka emininzi yamava emsebenzini wobunzululwazi.
Uhlala unxibelelana neqela lethu elizinikele kakhulu lenkxaso. Inkonzo yabathengi ibaluleke kakhulu kwiPapernerds.
Ungathembela kwimisebenzi yesayensi yePapernerds. Sinezikhokelo ezisemgangathweni ezingqongqo kubabhali bethu. Akukho kukopa, akukho miphumo.
Ngaba ufuna uncedo ngomsebenzi wolwimi lwasemzini? Akukho ngxaki! Iqela lethu elinamava liya kukuvuyela ukukucebisa ngeendawo zethu zobungcali neelwimi.
Ukuqonda kubaluleke kakhulu kwiiPapernerds. Ukongeza kunxibelelwano olofihliweyo nolungaziwayo, sithobela ngokungqongqo ukhuseleko lwedatha.
Yonke imisebenzi yesayensi iphicothwa ngumfundi wesibini ngokulungelelanisa nombhali. Isoftware yePlagiarism ijonga umohluko.
Enkosi ngoncedo olukhawulezileyo nolufanelekileyo oluvela kwiipapernerds, ndakwazi ukulungiselela kakuhle. Enkosi!
UJule H.Indawo yokufundisa
Inkxaso evela kubahleli bam bePapernerds.de banike umsebenzi wam wasekhaya ukugqiba. Umfowunelwa wayehlala enobuhlobo kwaye enobuchule.
Ngoncedo lweepapernerds kwakulula kakhulu ukufumana iphepha lekota eyunivesithi.
UMila S.IsiJamani njengolwimi lwasemzini
Enkosi ngoncedo olukhulu. Kumnandi ngokwenene ukusebenza nabantu abayaziyo into abayenzayo. Ngaba unokucetyiswa nje!
UFeliksi M. amayeza
Ngaphandle kwakho ngekhe ndenze umhla wam wokugqibela! Enkosi. 🙂
Uncedo kuba andizukuyenza ngexesha. Umcebisi wam wayephendula kakhulu kum kwaye waye luncedo kakhulu kwinqanaba lokulungiswa. Enkosi, qhubeka njalo.
UMax A.Umsebenzi wentlalontle
FUMANA ISIBONELELO ESINGABOPHISIYO NGOKU
Nceda uthumele imibuzo okanye ii-odolo ezintsha ezivela kubathengi bethu abakhoyo ngqo kumphathi wakho.
Ndiyifundile imigaqo kunye neemeko (https://papernerds.de/AGBs/) kunye nesibhengezo sokhuselo lwedatha (https://papernerds.de/datenschutzerklarung/) kwaye ndiyayamkela.
Idatha yakho iya kuba nathi ziyimfihlo ngokungqongqo uphathwe! Wonke umsebenzi wenziwa ngokungaziwa. Ngokucofa "Isicelo ngaphandle kwesibophelelo", ndinika imvume yam ekusetyenzisweni kwedatha yam ngokokuhambelana ne Ukukhuselwa kwedatha.